Isityumzi somzi mveliso, abaxhobisi - China Crusher abavelisi
Lo matshini unokusetyenziswa ngokubanzi kwilayini yemveliso yelitye, uhola wendlela kunye namanye amashishini. Isityumzi segumbi lesithathu, umzimba ojikelezayo ononxibelelwano olungenaqhosha elinemikhono emininzi, isando esomeleleyo sokunxiba, faka ifom yokufaka, isihlalo esityebileyo sokuthwala, ubume bezinyo obunemingxunya yokufaka ipleyiti, ukuvulwa kwesakhelo okuninzi, isikripthi okanye isixhobo sokuvula kulula ngakumbi ukubuyisela iindawo ezinobuthathaka kunye nokuhlaziywa.
Olu luhlu lweemveliso zineempawu zomlinganiso omkhulu wokutyunyuzwa, ubungakanani bezinto ezifanayo, ulwakhiwo olulula, ukusebenza okuthembekileyo, ulondolozo olulula kunye neendleko zokusebenza kwezoqoqosho. Isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, ukunyibilikisa, izinto zokwakha, uhola wendlela, uloliwe, ukugcinwa kwamanzi, ishishini lamachiza kunye namanye amasebe amaninzi. Ingazityumza izinto ezahlukeneyo ngamandla acinezelayo angaphantsi kwe-350 MPa.
Isando isando isityumzi luhlobo olutsha lomatshini otyumkileyo. Kukulungele ukucola i-brittle, medium hard kunye nezinto ezahlukeneyo ezinomxholo omncinci wamanzi. Kwizinto zokwakha, isinyithi, ishishini leekhemikhali, ishishini lokuvelisa umbane oshushu, ubukhulu becala isetyenziselwa ukutyumza amalahle, imigqa, ilitye lentlabathi, ishale, ilitye lekalika, i-gypsum kunye nezinye izimbiwa.
Isityumzi mqengqeleki inokusetyenziswa ekusombululeni izimbiwa, ishishini leekhemikhali, isamente, i-refractories, abrasives, izinto zokwakha kunye namanye amacandelo amashishini ukutyumza zonke iintlobo zobunzima bokuphakama okuphezulu kunye naphakathi kwamatye, ngakumbi kwishishini lezinto zokwakha ukuvelisa ilitye le-melon kunye ne-mung isanti yeembotyi kunye nezinye iimveliso, ezinesiphumo esingcono sokutyumza kunoomatshini bokutyumza ngokubanzi. Okwangoku, isetyenziswe ngokubanzi.